Pana ChildhoodBiography.com, hutano hwevashanyi vedu hunokosha zvikuru kwatiri. Iyi purogiramu yepachivande inotsanangura rudzi rwemunhu wega wega anogamuchirwa uye anounganidzwa nesu uye kuti yakashandiswa sei.
Kunge mamwe maWebhu saiti, tinoshandisa mafaira erogi Ruzivo rwuri mukati megogi mafaira runosanganisira internet protocol (IP) kero, mhando yebrowser, Internet Service Provider (ISP), zuva / nguva chitambi, kutaurisa / kubuda mapeji, uye akati wandei kudzvanya kuongorora maitiro, manejimendi saiti, kuteedzera yemushandisi kufamba uchitenderera saiti, uye kuunganidza ruzivo rwehuwandu. IP kero uye rumwe ruzivo rwakadai haruna kubatana kune chero ruzivo rwunozivikanwa pachako.
ChildhoodBiography haina kushandisa cookies.
. :: Google, sevatengesi vechitatu, anoshandisa kuki kuti ashandise ads pane ChildhoodBiography.com.
. :: Kushandiswa kweGoogle kweDOC cookie inoita kuti itange kushambadzira kune vashandisi zvichienderana nekushanyira kwavo kuChildrenBiography.com nedzimwe nzvimbo paIndaneti.
Zvakakosha kucherechedza kuti ChildhoodBiography.com haina ruzivo rwekutora kana kutonga pamusoro pekikiki inoshandiswa nevashambadzi vechitatu.
Iwe unofanirwa kubvunzurudza mitemo yega yega yega yep ad ad server kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pezviito zvavo pamwe nemirairo pamusoro pekusarudza-kubva kune dzimwe tsika. ChildhoodBiography purogiramu yekusachengetedza haina kushanda kune, uye hatikwanisi kudzora mabasa e, vakadaro vashambadzi kana mawebsite.
§ Kuwanda kwevanhu uye Kufarira Kuzivisa
Vashandi vanogona kugadzirisa zvido zvekuti Google inokuzivisa sei uchishandisa peji yeGoogle Ad Settings. Zvimwewo, unogona kusarudza nekushanyira peji yeConnection Advertising Initiative opt-out kana kushandisa zvachose neGoogle Analytics Opt-Out Browser Add-on.